Réponses pour «fanabeazana»:
Total: 13 résultats - 0.058 secondes
Nizara roa ny fiofanana dia ny fomba fanentanana sy ny famoronana fitaovana aratsiansa amin'ny endrika fialam-boly ho fanabeazana.
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 92%
Kitro ifaharahan’ny Fandriampahalemana sy ny Fiadanana ny fanabeazana ny taranaka.
TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 82%
Madagascar PRSP Malagasy 79%
Fanovana ny fanabeazana Teny Ifanomezana 4 :
FANDAHARANA TILY MAITSO 73%
Ny fihetsepaham-pikambanana skoto dia hetsika fanabeazana ho an’ny tanora, mifototra amin’ny firotsahana an-tsitrapo;
TADY LAHARANA 186 59%
koa tamin=iny volana Septambra ihany ihany koa, dia nihetsika ny AMadagascours@, fikambanana frantsay misahana ny fanabeazana, izay tanora tato amin=ny Vaomieran=ny gazety TADY, zanaka am-pielezan=ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia any France, no prezidantiny.
Nanomboka teo dia izay hahatafidirana anatin’ny fitondrana sisa tanjon’ny antoko politika fa ny fanabeazana ny vahoaka natao anjorom-bala.
fiche pcd fr mg CMP fianar 49%
i) Fanabeazana ny mpanjifa ny fitaterana amin’ny alalan’ ny haino aman-jery.
Ampahatsiahivina fa eo amin‟ny lafiny fanabeazana, ny antsasaky ny Olombelona Koreá Tatsίmo, dia nandálo ny fampianarana ambóny avokóa [Anjerimanontolo Îniverįşίté] tamin‟ny taona 2007;
Bulletin Mensuel Tresor N37 28%